Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Gudiyada Faracyada JABSO oo Maanta Qabsoomay.
Shirkii Gudiyada Faracyada JABSO oo Maanta Qabsoomay.
Maanta oo Khamiis ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 30/11/17 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab kaqabsoomay shirkii sadex bilood laha ahaa ee gudiyada faracyada kadhisan Gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Shirkan oo caadiyan laqabto sadexdii biloodba mar ayaa ah shir meerta ah oo hadba deegaan lagu qabto waxaana shirka inta badan kasoo qayb gala gudiyada faracyada Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee kadhisan Gaarissa, Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxlay.
Sidoo kale kulankan oo ah mid aad muhiim u ah ayaa lagu casuumaa qaar kamid ah madaxda Jabhada ONLF iyo gudiga qoxootiga Ogadenia ee kadhisan xeryaha Dhadhaab.
Kulanka oo maanta jawi qurux badan kuqabsoomay ayaa lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah waxaana si cilmiyaysan loo qoray qodobada ay tahay in maanta laga doodo, waxaana si hufan looqaadaa dhigay qodobadii ay gudiyada kala duwan ee faracyadu soo gudbiyeen.
Kulanka oo qabsoomay galinkii hore ee maanta ayaa saacado badan socday waxaana lasoo gabagabeeyay xili dambe oo maanta ah, waxaana siwayn loogu qaadaa dhigay qodobo muhiim ah.
Mid kamid ah gudiga shirka kasoo qayb galay oo Wakaalada Wararka Ogadenia ONA lahadlay ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid wax badan ka qabta shaqooyinka jaaliyada, iyo waliba howlaha guud ee halganka ay JWXO hormuudka utahay.
Sidoo kale sargaalkan ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid ay go’aamo muhiim ah kasoo baxaan, wuxuuna carab baabay in kulankan uu ahaan doono mid si joogta ah hadba deegaan loogu qabto hadii Alle idmo.